Dhibaatada Muslimiinta ka haysata dabaasha | Somaliska
Muslimiin fara badan oo ku nool Sweden ayaa ka fogaada goobalaha lagu dabaasho iyadoo taas sabab looga dhigayo isku dhex jirta raga iyo dumarka. Swedishka taga goobaha lagu dabaasho ayaa ka cabanaya in dadka soo galootiga ah ee yimaada goobaha dabaashada aysan xushmeyn sharciga goobta oo ay iyagoo dharkooda wata la galaan dabaasha ama qolka qubeyska halka Swedishku ay isla qubeystaan iyaga oo qaawan. Warqad ay u direen wargeyska Södra Sida qaar ka mid ah kuwa dadka dabaasha xarunta dabaasha ee xaafada Skärholmen ayay kaga dacwoodeen dadka soo galootiga ah ee aan dharka iska dhigin marka ay ku jiraan qolka qubeyska. Dadkaan dacwoonaya ayaa ku doodaya in haddii aysan rabin in cowradooda la arko ay shukumaan isticmaali karaan. Balse dacwada dadkaas ay soo gudbiyeen ayaa waxaa qilaafay maamulaha xarunta dabaasha ee Skärholmen Thomas Lindell Taylor isagoo sheegay in aan soo galootiga oo keliya farta lagu fiiqi karin. Qaasatan Dumarka Muslimiinta ah ayaa ka mid ah kuwa ka dheeraada goobaha lagu dabaasho marka laga reebo goobo qaas ah oo ku yaal magaalooyinka waaweyn oo waqti siiya dumarka oo keliya. Waxaa muuqata in isku dhac xaga dhaqanka ah uu ka taaganyahay goobaha lagu dabaasho. Sidoo kale dhibaatada waxay dabaasha ka haysataa gabdhaha Muslimiinta ah ee dhigta iskuulada oo laga doonayo in ay xaadiraan dabaasha. Sanadkii 2008 ayaa magaalada Göteborg lagu ganaaxay in ay lacag siiyaan labo dumar Muslimiin ah ka dib markii laga saaray goob lagu dabaasho dharkooda darteed. Sanadkii 2009 ayaa sharci cusub oo soo baxay waxa uu mamnuucay in dumarku aysan naasahooda oo qaawan gali karin dabaasha.
Muslimiin fara badan oo ku nool Sweden ayaa ka fogaada goobalaha lagu dabaasho iyadoo taas sabab looga dhigayo isku dhex jirta raga iyo dumarka. Swedishka taga goobaha lagu dabaasho ayaa ka cabanaya in dadka soo galootiga ah ee yimaada goobaha dabaashada aysan xushmeyn sharciga goobta oo ay iyagoo dharkooda wata la galaan dabaasha ama qolka qubeyska halka Swedishku ay isla qubeystaan iyaga oo qaawan.
Warqad ay u direen wargeyska Södra Sida qaar ka mid ah kuwa dadka dabaasha xarunta dabaasha ee xaafada Skärholmen ayay kaga dacwoodeen dadka soo galootiga ah ee aan dharka iska dhigin marka ay ku jiraan qolka qubeyska. Dadkaan dacwoonaya ayaa ku doodaya in haddii aysan rabin in cowradooda la arko ay shukumaan isticmaali karaan.
Balse dacwada dadkaas ay soo gudbiyeen ayaa waxaa qilaafay maamulaha xarunta dabaasha ee Skärholmen Thomas Lindell Taylor isagoo sheegay in aan soo galootiga oo keliya farta lagu fiiqi karin.
Qaasatan Dumarka Muslimiinta ah ayaa ka mid ah kuwa ka dheeraada goobaha lagu dabaasho marka laga reebo goobo qaas ah oo ku yaal magaalooyinka waaweyn oo waqti siiya dumarka oo keliya. Waxaa muuqata in isku dhac xaga dhaqanka ah uu ka taaganyahay goobaha lagu dabaasho.
Sidoo kale dhibaatada waxay dabaasha ka haysataa gabdhaha Muslimiinta ah ee dhigta iskuulada oo laga doonayo in ay xaadiraan dabaasha.
Sanadkii 2008 ayaa magaalada Göteborg lagu ganaaxay in ay lacag siiyaan labo dumar Muslimiin ah ka dib markii laga saaray goob lagu dabaasho dharkooda darteed. Sanadkii 2009 ayaa sharci cusub oo soo baxay waxa uu mamnuucay in dumarku aysan naasahooda oo qaawan gali karin dabaasha.
(QABYAALAD WAA KA MAMNUUC SOMALISKA.COM HADDII ARINTAAN DHACDO MARKALE SOMALISKA WAA LAGAA MAMNUUCAYAA) tirada badan sistemki ayeey wadanki uga ciyaaren wadanki ayaa qeylinaayo badaa iyo mel walbe kasoo dateen muslimina waanala wataan war magaca diinta haku ciyaarinina dadkana nabad galyo siyaa wax damiirki katagayaa tihiine wadanki dhamaa cariiri ayaaka dhigteen inti
asc all somalia poeple walal yaal waxan idin dhihi lahaa aflagaado waa xaran in reer dhan aad aflagadeyso taas runtii hadii qof ku xumeyo dadka oo dhan lama caaynayo taas waa maan gaab runtii aniga waxba igama galan lkn waxan necebahay cayda hadii qof allah uu badiyo waa wax allah uu bixiyo tirada badan & wax yar lkn somalia waa somalia
doqon aan wax aarsan karin wey caydantaa mar walba
aniga ayaa garanayo nin kan waan nin yar waalan
oo kayimid mayiga fog taas ayaa wax u dhintay in uu mar waliba reer caayo maxuma waa fikirkiisa raqiista ah
hej sacmaal ma aqrisadaay somali .com ina laga hadli kariin qabiil maantana ma ahaan ina qabiil ka hadashiid adigo kale waxaa tahay qof cilmigisa dhaan yahay qabiil ee uqdada iska saar iyo badow nimada qofka marku qabiil ka hadlo waa qof badawa ille meeshan waxaa logu talagalaay in laga hadlo wax umada jiidka tosaan ku rido ama waya araagnimo oga siyado ma ahaan in qof waxba ana ogeynin rayigisa la raco ee alle ka cabso ee uqdada iska saar somalina dhiibkeda ma ahaan wax hal qabiil kaliya ee umadana afkaga ka day ee waxaa kale kugu dari lahay figradeyda ina meelaha wax laga barta aad sida ugu muqsushiid wax barashada dadka afkaga ku heysid ma og tahay iney dad eheli diin yihiin marka badidoda ka hadleysid masha alahana ku dar intaas ayaan ku le yahay igana rali noqo hadey ku jiraan wax ku dhibayo waana wax adiga geysadaay
Asc akhyaarta sharafte ninkaan abgaal kuwaashay anaa fahmay warkiisa abgaalka soo galay ayoo ka xunyahay saaxibow somaliska.com qabiil loogama hadlo qabiil kaabadan sharaftiisa haku xad gudbin hadaay rabtid aad pltak
April 30, 2011 at 16:42
waxaan dhihi lahaay magaca saacmaal iskana soo badal ile badow nimadada banaanka talo uqdadana iska saar ile wey kula taagtay waa ku soo duceyna ino alle ka saro asc
asc dhaamn waa idn salamay aqyaarta sharafta leh waxaana idin ku salamayaa salanata islaamaka oo ah aslaaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu
hadaa nahay somali weyn waa inaan ka hadalnaa heerka aan taaganahay maanat ee maha inaan ka hadano waxii na burburiyay nin kii ka hadla tarabilismna asaga ayeey dhibaysaa oo ay cuslaynaysaa mida kale hadaa nahay muslim alxamdulilaah ilahay ayaa noo nimceeyay waana muhiim inaan jirkeena asturnaa oo aanan dhibin dadka bini aadankaa mida kale dadka ka hadlaya qabiilka haku quus qaataan maanat somaliweyn mesha ay taagantahay iyo dhibka haysat waxaan leeyahay ilahow kasaar dhibaatada oo ka dhig mid isku duuban oo mar labaad caalamka ka soo ifbaxda maanta waad u jeedaan waxaan kala daadsanahay qurbaha hadan waxaan isku kala saaraynaa reer qansax reer qurac waxaas waa inaan ka soo taganaa oo aan ka hadalnaa ayaheena iyo fikirkiina Somaliska.com waa mahadsanyahay